Telescope, Qoryaha Qoryaha, Telescope Dibadeed, Telescope Astronomical - Lijing
Keenitaanka Warshada ---Ma jiro Mid Dhexe--- OEM/ODM La heli karo
Binoculars dadka waaweyn
Monocular dadka waaweyn
Hadda iyo Mustaqbalka
Jawaab celinta alaabta
Soo celinta & Dayactirka
Maxaan Sameyn karnaa
Qalabka Aragga Habeenka Binocular
Mar, waxaanu ahayn koox saaxiibo ah oo wadaagay hamiday u qabeen indho-indhaynta gaarka ah oo doonayey inay sahamiyaan awoodaha aadanaha.
Maanta, waxaan la wadaagnay shirkadaha iibka jirka ee in ka badan 1,000 suuqyada rayidka ah ee adduunka iyo iibiyeyaasha e-commerce sida Amazon.
Waxaan nahay Warshada Qalabka Indhaha ee Lijing-warshad indhaha ah oo diiradda saareysa bixinta binoculars, aragga habeenka, naqshadeynta aragga, habeynta LOGO, beddelka summada iyo hal-abuurka badeecada.
1 daqiiqo Baro Warshada indhaha ee Lijing
Heerkayaga 7 ee aan biyuhu lahayn
ADEEGGA OEM ODM
In ka badan 15 sano oo waayo-aragnimo ah
Tan iyo 2001, tignoolajiyada heer sare ah ee warshadeena waxay ku kasbatay sumcad nafteena, Oo waxay noqonaysaa shuraako leh rikoor nadiif ah iyo iibka jireed ee la xaqiijiyay ee shirkadaha in ka badan 1,000 suuqyada rayidka ah ee adduunka oo dhan iyo hormuudka iibiyeyaasha e-commerce sida Amazon.
Yaan nahay?Xagee ka nimid?
Waxaan nahay soo saaraha qalabka indhaha!
Warshadayadu waxay ku taal Chengdu, Shiinaha.
Maxaan kuu qaban karnaa?
Waxaan had iyo jeer ka dhignaa hal dhibic si aan u ilaalino heerarka ugu sarreeya ee suurtogalka ah oo aan siino OEM iyo ODM adeegyo gaar ah oo loogu talagalay dhammaan alaabadayada, sida carruurta iyo dadka waaweyn ee indhaha ku haya, muraayadaha monoculars, muraayadaha shimbiraha-daawashada, cabbirrada qoryaha, qalabka wax-aragga habeenkii, golfka Raadiyeyaal kala duwan, raadiyeyaal kala duwan oo caalami ah, iyo telescopes xiddigiye.
Kooxda Naqshadaynta Xirfadlayaasha
Waxaan taageernaa ururada dhinac saddexaad inay yimaadaan warshadeena si ay u xaqiijiyaan alaabta.
Express: 3-5 maalmood
Xamuulka hawada: 7-12 maalmood
Raritaanka: 24-29 maalmood
Dhammaan alaabadayada si adag ayaa loo tijaabiyey oo waxay leeyihiin taageerada CE, FC, iyo shahaadooyin kale oo caalami ah.Sidaa darteed, waxaanu si kalsooni leh u hubinaynaa tayada alaabtayada aadka u wanaagsan.Guntii iyo gabagabadii waxa aynu aaminsanahay tayada ee ma aha tiro.Waxaan had iyo jeer ka dhignaa hal dhibic si aan u ilaalino heerarka ugu sarreeya ee suurtogalka ah oo aan siino OEM iyo ODM adeegyo gaar ah oo loogu talagalay dhammaan alaabadayada, sida carruurta iyo dadka waaweyn ee indhaha ku haya, muraayadaha monoculars, muraayadaha shimbiraha-daawashada, cabbirrada qoryaha, qalabka wax-aragga habeenkii, golfka Raadiyeyaal kala duwan, raadiyeyaal kala duwan oo caalami ah, iyo telescopes xiddigiye.
Maarso 29, 2022
Mabda'a iyo qaab-dhismeedka telescope-ka xiddigiska
Telescopes-yada Astronomical-ku waxa ay ogaan karaan xiddigaha boqollaal milyan oo sanadaha iftiinka ah ama ka badan sababtoo ah hirarka Electromagnetic-ka ee xiddigahani waxa ay u gudbinayeen dhulka in ka badan boqollaal milyan oo sano ka dibna lagu arkay telescopes xiddigiska.Waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo cirbixiyeen...
Maarso 21, 2022
Mabda'a telescope astronomical
Haddaba maxay u baahan yihiin dadka cusub inay fiiro gaar ah u yeeshaan marka ay wax iibsanayaan?
Isagoo ka hadlaya telescopes-ka-meel-gaadhka ah, waxa jira laba nooc.Mid waa mid si fudud is haysta oo la qaadi karo, kan kalena waxaa loogu talagalay daawashada shimbiraha, cirka xiddigaha leh ama isticmaalka badmaaxidda.Dhab ahaantii, raaxada telescope-ka-lens-ku aad ayuu uga yar yahay kan binocular.Dabcan, qof kastaa wuxuu leeyahay baahiyo kala duwan.Waa mid aad u xiiso badan...
HALKAN AYAA NAGA SOO XIRIIRI KARTAA